City of Vantaa - 19012021_koronarokotukset_somali
Tallaal looga hortegayo caabuqa koroonaha
Waxaan boggaan ku soo uruurinay macluumaadka la xiriira tallaalka ee ku qoran luqaddaada hooyo. La socodka boggaan waxaad ka heleysaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda tallaalka ee degmada Vantaa iyo jadwalka tallaalka ee kooxaha kala duwan ee dadweynaha.
Faa’iidooyinka tallaalka korona
Tallaallada korona waa kuwo ku habboon dhammaan dadka oo dhan. Awoodda ilaalinta ee dhammaan tallaallada feyruska korona waa kuwo ku haboon kahortagga cudurka feyruska korona ee aadka u daran. Dalkaan Finland waxaa tallaalka korona la siiyaa dhammaan dadka da’doodu gaartay 5-ta sano, ee doonaaya in ay qaataan tallaalka. Tallaalladu waa kuwo bilaash ama lacag la’aan ah, waxaana la siiyaa kooxaha kala duwan ee dadka, iyadoo la raacaayo nidaamka loo dejiyay ee tallaalka feyruska korona ee dalkaan Finland.
Tallaalka waxaa uu ku siinayaa oo si aad u fiican kaaga ilaalinayaa feyruska korona iyo cudurka korona.Tallaalku waxaa uu yaraynayaa faafista feyruksa uu ku dhex faafaayo dadka dhexdiisa, waana sababtaas midda qofka la tallaallay uu u ilaalinaayo xittaa tusaale ahaan, dadka waayeelka ee ehelekiisa ah. Tallaalku kama koobna wax feyruusyo nool oo feyruska korona ah, sababtaas awgeed ayaadan tallaalka uga qaadaynin feyruska korona. Tallaalka wuxuu barayaa unugyada jirkaaga in ay iska difaacaan feyruska korona.
Waxyeellooyinka feyruska korona
Waxaa dhici karta in tallaalku uu yeesho waxyeellooyin. Astaamaha waxyeellooyinkaas waxaa isku arka dadka la tallaallay qaarkood, inta ugu badanna waa kuwo fudud oo si dhakhso ah ku baaba’aaya.
Tallaalka kaddib waxaa dhici karta in goobta la tallaalay ay xanuunto, islamarkaana ay noqoto cassaan ama guduud. Waxaa dhici karta in aad dareento daal, madax-xanuun ama waxaaba dhici karta in murquhu ay ku xanuunaan. Mararka qaarkood waxaa dhici karta in tallaalka uu keeno xummad ama qandho, amaba aad dareento xanuun.
Astaamaha khafiifka ah waxaa ay bilowdaan laba maalmood gudahood laga soo bilaabo marka qofka la tallaallay. Waxaana ay ku baaba’ayaan dhowr sacaadood ama dhowr maalmood gudahood. Waxaa kuwaas lagu daryeeli karaa daawooyinka xanuun baabi’iyayaasha ah. Astaamaha fudud ee ka dhashay tallaalka, ma ahan kuwo horistaagaya qaybaha sii socda ee tallaalka.
Falcelinnada naadirka ah ee tallaalka korona waxaa ay kala yihiin:
⁃Caabuqa ama infekshanka murqaha wadnaha
⁃Dhibaatada xinjirowga dhiigga
Intii la isticmaalaayay tallaalka korona kama soo ifbixin waxyeellooyin aad u daran, kuwaasoo soo ifbixi karay dhowr bilood tallaalka kaddib. Ammaanka tallaalka feyruska korona si joogto ah ayaa loola socdaa dalkaan Finland iyo heer caalami ahaan ah.
Waa maxay sababta ay tallaal qaadashadu uga fiican tahay halkii uu kaaga dhici lahaa cudurka korona?
Si aad u weyn ayay uga ammaan fiican tahay in aad qaadato tallaalka korona, halkii aad ka qaadi lahayd cudurka korona. Faa’iidooyinka iyo waxyeellooyinka tallaalka korona hore ayaa loo baaray, waxaana loo garanayaa si aad u wanaagsan. Inta ugu badan waxyeellooyinkaas waa kuwo fudud oo si dhakhso ah ku baaba’aaya. Waxyeellooyinka aadka u daran waa kuwo naadir ah, waana kuwo la yaqaan qaabka loo daryeelaayo.
Waxyaabaha ka dhalan kara feyruska korona waa kuwo aan la sii qiyaasi karin. Si dhab ah hore looguma sii ogaan karo, in tallaalka korona marka la eego adiga ahaan uu dhankaaga yahay mid aad kuugu daran iyo inkale, ama ay ka dhalan karaan cuduro dambe ama astaamo muddo dheer sii socda. Waxaa wali socda baarista ku saabsan daryeel wanaagsan oo loo helo feyruska korona, laakiin illaa iyo haatan ma jiraan wax ku saabsan daawayn ama qaab daryeel ah oo la hubo oo la xiriira feyruska korona.
Tallaalka Korona ee degmada Vantaa
Waxaad goobta tallaalka imaan kartaa, adigoo aan wax ballan hore u soo qabsan.
Si kastaba haddii aad dooneyso in aad qabsato ballanka tallaalka, waxaad ka qabsataa cinwaanka internetka ee ah: www.koronarokotusaika.fi. Haddii ay suuraggal kuu noqon weyso inaad internetka ballanka ka qabsato, waxaad ballanka ka qabsan kartaa telefoonka 09 839 50090 (isniin – jimco saacadda 8-15). Adeeggaan telefoonka waxaad u reebi kartaa farriinta ah in dib laguu soo waco, waana lagu soo wici doonaa, haddi aad codsigaas reebto.
Telefoon lambarkaas waxaa loogu talaggalay oo kaliya wakhtiga ballan qabsashada, looguma talaggalin in warbixin loo soo raadsado, si khadka telefoonka uusan mashquul u noqon.
Dhammaan goobaha tallaalka waxaa ka jira waqtiyo loogu talaggalay dadka ballanka soo qabsaday iyo kuwa aan wax ballan ah u qabsoonayn.
Goobaha tallaalka ee tooska loo imaanaayo iyadoo aan wax ballan ah kuu qabsanayn ee la yiraahdo (Walk in), waa inaad ku soo talaggashaa in aad saf galayso.
Goobaha tallaalka ee Vantaa waxaa ay kala yihiin:
- Varia, Hiekkaharju (Tennistie 1)
- Dixi, Tikkurila (Ratatie 11)
- Myyrmanni, Myyrmäki (Iskoskuja 3)
- Energia Areena, Myyrmäki (Rajatorpantie 23)
- Jumbo, Pakkala (Vantaanportinkatu 3)
- Martinlaakson ostoskeskus (Xarunta dukaamada ee Maartinlaakso), Martinlaakso (Kivivuorentie 4)
- Lumon lukio (Dugsiga sare e Lumo), Korso (Urpiaisentie 14)
Waxaad ogaataa in kahor intaadan gelin goobta tallaalka, ay dhici karto in wax xoogaa muddo ah aad bannaanka ku sii sugto, si aan u helno arrinkii ahaa kala fogaanshaha 2-da mitir. Qofka wehelka u ah kan la tallaallaayo, waxaa kaliya oo uu goobta tallaalka soo geli karaa, haddii uusan qofka la tallaallaayo kaligiis isku dabbari karin goobta tallaalka. Goobta tallaalka waa in la isticmaalaa afshareerka, lagana taxaddaraa nadaafadda caafimaadka ee wanaagsan.
Cidda loogu talaggalay
Dadka ka tirsan kooxaha loogu talaggalay tallaalka, waxaa ay tallaalka ka raadsan karaan meel kasta oo kamid ah goobaha tallaalka korona ee Vantaa.
Tallaalka korona ee koowaad iyo labaad. Waqtiga u dhexeeya labada tallaal waa 6-12 toddobaad.
•Dhammaan ilmaha buuxiyay dad’da 12 sano, waxaa ay ku imaan karaan wakhtiga ballan qabsashada ama si toos ah ayay u imaan karaaan goobta tallaalka ee tooska loo imaanaayo (walk in).
•Dhammaan ilmaha da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir, waxaa ay ku imaan karaan oo kaliya in ay qabsadaan wakhtiga ballan qabsashada.
•Dadka buuxiyay da’da 60-ka sano iyo kuwa xaaladdooda caafimaad awgeed ku jira kooxda u nugul halista cudurrada. Waxaa la siinayaa marka 3 bilood ka soo wareegto tallaalka 2.aad wakhtiga ballan qabsashada ama goobaha sida toos ah loo tago ee aan u baahnayn ballan qabsashada ee loo yaqaan (Walk in).
o4 bilood laga soo bilaabo tallaalka 2.aad, waana in la qabsado ballanka wakhti qabsashada
o5 bilood laga soo bilaabo tallaalka 2.aad, waana in la qabsado ballanka wakhti qabsashada ama si toos ah loo tago goobaha (walk in) ee aan u baahnayn wakhtiga ballan qabsashada
Tallaalka xoojinta ee afaraad waxaa loogu talaggalay dadka uu difaacooda jirka si aad u daran u hooseeyo, in la siiyo 3-4 bilood marka ay ka soo wareegto tallaalka saddexaad. Waxaana lagu siinayaa wakhtiga ballan qabsashada ama si toos ah goobta (walk in) ee aan u baahnayn wakhtiga ballan qabsashada.
Waa maxay sababta loogu baahan yahay qaybta saddexaad ee tallaalka?
Waxaa cilmibaarisyada la sameeyay lagu ogaaday, in awoodda difaac ee tallaalka uu kaga hortagaayo caabuqa ama infekshanka ay soo daciifayso muddo kaddib. Qaybta saddexaad ee tallaalka waxaa ay yaraynaysaa cadadka caabuqa ama infekshanka feyruska korona, waxaana ay ka horatagayaan faafista cudurka. Waxaa ay yaraynayaan in feyrusku uu ku dhex wareego bulshada dhexdeeda ugu yaraan intii muddo ah, waxaana ay kordhinayaan oo dheereynayaan ilaalinta iyo kahortagga cudurka feyruska korona ee aadka u daran.
Tallaalka loogu talaggalay dadka uu ku dhacay cudurka feyruska korona
In qofku uu ku dhacay cudurka feyruska korona, ma diidayso in uu tallaalka qaato.
Tallaalka wax dhibaato ah ma lahan, xittaa haddii qofka tallaalka la siinaayo uu ku jiro xilliga soo bixidda caabuqa feyruska korona.
Qofka uu cudurku ku dhacay waxaa uu inta ugu badan ilaalinayaa muddo 6 bilood ah, sidaas awgeed tallaalka feyruska korona waxaa la siin karaa marka ay muddo 6 bilood ah ka soo wareegto caabuqa feyruska korona.
Xittaa dadka ka cabanaaya astaamaha caabuqa feyruska korona ee dabadheeraaday waa la tallaali karaa, laakiin waa in tallaalka dib loo dhigaa, haddii qofka xaaladdiisa caafimaad ay aad u liidato.
Haddii tallaalka la siiyo qofka islamarka uu cudurku ku dhacay, waxaa dhici karta in uu ku keeno falcelin tallaalka oo aad u xoog badan oo baaba’aysa, sida qandho ama xummad, madax-xanuun, muruqa iyo kalagoysyada oo xanuuna.
Tallaalka loogu talaggalay haweenka uurka leh iyo hooyooyinka ilmaha nuujinaaya
Waxaa cilmibaarisyo badan oo la sameeyay lagu ogaaday in feyruska korona uu ku keeno haweenka uurka leh cudur aad u daran. Khatarta ah in uu qofku u baahdo daryeel isbitaal iyo daryeelka degdegga ah waa mid aad u weyn. Sidoo kale waxaa ku badan in ay dhalaan xilli hore oo ka horeeya waqtigii loo qabtay ama in lagu soo qalo ilmaha, marka loo eego kuwa uusan ku dhicin cudurka feyruska korona.
Finland waxaa laga isticmaalaa tallaalka nooca mRNA. Nooca tallaalkaas waa mid ammaan u leh xilliga uurka. Tallaalka laguma arag wax dhibaato ah oo la xiriirta uurka, sidoo kalena wax khatar ah kuma laha ilmaha. Waxaa arrinkaan ka soo horjeeda: marka ay muddo laba toddobaad ah ka soo wareegto qaybta koowaad ee tallaalka, waxaa uu sidoo kale ilmaha hadda dhashay u leeyahay maaddada kahortagga feyruska korona. Tallaalka hooyada la siinaayo wuxuu ilaaliyaa ilmaha markaa dhashay.
Qofka dhallinyarada isaga ayaa go’aan ka gaari kara qaadashada tallaalka, haddii qofka la tallaallaayo uu u arko inuu u bisil yahay go’aan ka gaarista arrinkiisa. Haddii qofka dhallinyarada ah uusan awoodin ama doonayn inuu go’aan ka gaaro arrinkiisa, waalidka ayaa la weydiinayaa oggolaanshaha tallaalka.
Qofka dhallinyarada ah wuxuu cudurka korona ku yahay mid fudud, laakiin xitaa dhallinyarada caafimaadka qabta waxaa ka soo ifbixi kara cudur aad u daran oo u baahan daryeel caafimaad. Waxaa jira xanuunno gaar ah oo kordhin kara khatarta ah, in ilmaha ama qofka dhallinyarada ah uu ku dhaco cudurka feyruska korona ee aadka u daran.
Waxaa jira xaalado gaar ah oo dadka qaatay tallaalka mRNA- lagu arkay waxyeellooyinka tallaalka ee ay ka midka yihiin caabuqa ama infekshanka murqaha wadnaha ama kiishka wadnaha. Xaaladahaas waxaa si gaar ah loogu arkay ragga dhallinyarada ah, marka ay qaataan qaybta labaad ee tallaalka kaddib. Sida caadiga ah dadka astaamahaas lagu arkay, si aad u wanaagsan ayay u caafimaadeen.
Ma waajib baa in dadka qaatay tallaalka feyruska korona ay wali ka taxaddaraan kala fogaanshaha iyo qaadashada afshareerka?
Tallaalka kaddib waxaa wali muhiim ah in lagu dadaalo kala fogaanshaha, la iska ilaaliyo isu imaatinka iyo goobaha ciriiriga ah, sidoo kale uu ka taxaddaro nadaafadda caafimaadka gacmaha iyo tan qufacidda, in la isticmaalo afshareerka marka la joogo goobaha aanay suuraggalka ahayn in la kala fogaado, sidoo kalena waa in marka ay astaamaha soo baxaan, uu qofku raadsado baaritaanka feyruska korona.Tallaalka kaddib waxaa ay qaadan doontaa dhowr bilood, kahor inta laga gaaraayo arrinka ah in bulshadu ay hesho difaaca kahortagga cudurka, islamarkaana la iska caabbinaayo cudurka.
Shahaadada korona ee Midowga Yurub
Shahaadada korona ee Midowga Yurub waxaa ay ka kooban tahay saddex shahaado oo kala duwan:
- shahaadada tallaalka korona
- shahaadada negetiifka ah (aan cudurka laga helin) ee natiijada baarista korona
- shahaadada ku saabsan in cudurka korona uu qofka ku dhacay
Shahaadada feyruska korona ee Midowga Yurub waxaa uu qofku ka soo dejisan karaa cinwaanka omakanta.fi. Sidoo kale waxaa xarumaha daryeelka caafimaadka aad ka codsan kartaa shahaadada korona ee waraaq ahaanta ah.
Waddanka dibaddiisa ma u safri karaa?
Isbeddellada dhakhsaha badan ee cudurka safmarka ah ee korona waa kuwo wali suuraggal ah in ay dhacaan. Sababtaas awgeed waa in laga baaqsadaa safarka aan loo baahnayn, islamarkaana loo hoggaansamaa taxaddarka gaarka ah ee la xiriira arrimaha safarka.
Haddii aad qorshaynayso inaad dibadda u safarto waxaad ogaataa, in dalka aad u socoto uu xaddidaad ku soo rogay soo gelitaan dalka iyo inkale. Waxaad ka hubsataa hawlwadeennada dalka aad u safrayso, macluumaadkii ugu dambeeyay ee la xiriira dal soo gelitaanka iyo amarrada karantiilka, kahor inta aadan safrin, tusaale ahaan safaaradda dalkaas aad ku socoto.
Marka aad ku soo laabato dalkaan Finland, waxaa khasab kugu noqonaaya in aad ka qaybqaadato falalka waxqabad ee la xiriira ammaanka caafimaadka. Waxaana arrimahaas ka mid ah hubinta shahaadooyinka, ama hal ama labo baaritaanka korona. Sidoo kale waa inaad si ikhtiyaarkaaga ah isaga ilaalisaa la xiriirka dadka kale, illaa aad ka heleyso natiijada negatiifka ee goobta dal soo gelitaanka ama baaritaanka feyruska korona ee kagadaal lagaa qaaday.
Vantaa waxaa ay siineysaa tallaalka korona, dhammaan carruurta da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir
Vantaa waxaa ay siineysaa tallaalka korona dhammaan carruurta da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir. Tallaalku waa mid ikhtiyaari ah.
Tallaalka carruurta ay da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir, waxaa la qabanqaabinayaa waqti ka duwan kan dadka ka waawayn da’da 12-ka sano. Waxaad halkaan ka hubisaa goobaha tallaalka ee carruurta. vantaa.fi/koronarokotukset
Tallaalka carruurta da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir waxaa lagu heli karaa oo kaliya waqti ballansasho ah. Waxaad ballanka ka qabsan kartaa cinwaanka internetka ee ah http://www.koronarokotusaika.fi ama waxaad wici kartaa 09 5844 3030.
Tallaalista carruurta ay da’doodu u dhexeyso 5-11 sano jir, waxaa loo baahan yahay saxiixa waalidka. Labada waalidba waa in ay soo buuxiyaan foomka oggolaanshaha suostumuslomake
Waxaan soo jeedinaynaa, in waalidiintu ay foomka soo buuxiyaan kahor intaan la imaan goobta tallaalka.
Sidaan soo socota sameee, marka aad timaaddo goobta tallaalka:
Hore u sii qabso waqtiga ballanka.
Imoow goobta tallaalka waqtiga laguu qabtay oo ha soo daahin,
Xilliga tallaalka uu socdo oo dhan waxaa adiga iyo ilmahaaga aad ka taxaddartaan nadaafadda caafimaadka ee gacmaha iyo kala fogaanshaha.
Dhammaan ilmaha da’doodu ka yar tahay 12 sano waxaa goobta tallaalka laga siin doonaa afshareer. Isticmaalka afshareerka ee ilmaha da’doodu ay ka yar tahay 12-sano waa mid ikhtiyaari ah.
Waa maxay sababta ilmaha loo siinaayo tallaalka korona?
Tallaalku wuxuu ilmaha iyo dadka asxaabtiisa ah ka ilaalinayaa cudurka feyruska korona ee aadka u daran. Caadi ahaan ilmaha si aad u adag ulama xanuunsadaan korona, laakiin xadaymaha la soo rogay cudurkaan safmarka ah awgiis, ayaa waxaa ay saamayn xoog leh ku yeelanayaan nolosha ilmaha iyo dhallinyarada.
Maxaa laga ogyahay ammaanka ay tallaalladu ilmaha u leeyihiin?
Ammaanka tallaallada si dhab ah ayaa mar walba loola socdaa. Sida cilmibaarisyada lagu caddeeyay waxyeellada xun ee tallaalku ku leeyahay ilmaha iyo dhallinyarada, waa kuwo la mid ah kuwa dadka waawayn, sida meesha la tallaalay oo xanuuunta, daal, madax-xanuun, qandho ama xummad iyo jiriirico. Astamaahaas dhammaantood waa kuwo muddo yar kaddib dhammaanaaya.
Waaxda caafimaadka iyo fayo-dhowrka: Tallaallada iyo caabuqa koroonaha
Wasaaradda arrimaha bulshada iyo caafimaadka: Caabuqa koroonaha iyo tallaallada lasoo saarayo